यी ६१ वर्षिय मोडेलबारे कमैलाई थाहा छ
11 Aug 2020 | मंगलबार, २७ साउन, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
आइतबार, ४ साउन, २०७७
एजेन्सी । पछिल्लो समय मोडलिङका लागि युवाहरुको दौडधुप व्यापक रहेको छ । तर, एक ६१ वर्षिय मोडलले सबै २० देखि ३० वर्षका युवाहरुलाई पछि पारेका छन् ।
उनले आफ्नै बेग्लै पहिचान बनाउन समेत सफल भएका छन् । उनी हुन् दिनेश मोहन । उनले युवा मोडलहरुलाई कडा टक्कर दिदै आइरहेका छन् । उनको फिटनेस पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ । गुडगाउँका उनले यो यात्रा निकै संघर्ष गरेर गरेका हुन् । आज उनी जुन उचाईमा रहेका छन् त्यो उनको संघर्षको देन नै हो ।
४४ वर्षको छदाँसम्म उनी यति मोटा थिए कि उनलाई बस्न उठ्न तथा हिडडुल गर्न निकै कठिन हुने गथ्र्यो । उनको धेरै खाने बानीका कारण शरिरमा नराम्रो प्रभाव पारेको थियो । उनी मोटोपनका कारण बिरामी परे र एक वर्षसम्म ओछ्यानमा थलिए । सन् २००४ मा उनले जागिरबाट अवकाश लिए र बहिनीको घरमा गएर बस्न थाले ।
अवस्था झन् खराब हुँदै गयो । उनले भनेका थिए,‘मेरो जीवन चारैतिरबाट असफल देखिन्थ्यो । म डिप्रेशनमा गएको थिए । तर, यो भुमरीबाट बाहिर आउने उपाय भने मदेखि धेरै पर रहेको थियो ।’ सन् २०१४ मा उनी जिम जान थाले । परिवारले पनि उनलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।
उनले आफ्नो खानपानमा व्यापक सुधार ल्याए र फिटनेशनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिए । आठ महिनामा उनको शरिरमा नाटकिय परिवर्तन आयो । उनको शरिर देखेर उनको फिजियोथेरापिस्टले मोडलिङ गर्न सल्लाह दिए । नभन्दै उनले आज आफ्नो नाम मोडलिङ क्षेत्रमा बनाए । सन् २०१६ मा उनले पहिलो सम्झौतापत्र पाए । त्यसपछि उनले पछि फर्केर कहिल्यै हेर्नुपरेन ।
कर्णालीमा पानीको सतहले नाघ्यो चेतावनी तह
टीकापुर । कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि तटीय क्षेत्रमा त्रास शुरु भएको छ । सोमबार दिउँसो १ः३० बजेकोे रेकर्डअनुसार कर्णाली नदीमा पानीको सतह १० मिटर १६ सेन्टिमिटर पुगेको छ । कर्णाली चिसापानीका गेजरिडर
पर्सामा थप ७० जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि
पर्सा । बारा र पर्सामा थप ७० जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको पुष्टि भएको छ । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा पर्साका ६६ र बाराका चार जनामा कोरोना संक्रमण प
पार्टीमा सैद्धान्तिकभन्दा व्यक्तिगत टकराव छ : बोहरा
सिन्धुपाल्चोक । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अनुशासन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री अमृतकुमार बोहोराले पार्टीमा सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यक्तिगत टकरावका कारण समस्या पैदा भएको बताएका छन् । नेकपा क्ष
ब्रत बसेको बेला किन यौनसम्पर्क गर्नु हुँदैन ?
नेपाली हिन्दू समाजमा विशेषतः महिलाहरू साउन लाग्ने बित्तिकै तथा अन्य महिनाका पर्व वा दिन विशेषमा ब्रत वा उपवास बस्छन् । लामो समयको ब्रतका बेला कतिपय यौन जोडीले यौन सम्पर्कको अनुभव लिन चाहेका हुन्छन् । ब्रतका समयमा महिलाहरू धार्मिक एवं मानसिक तवरमा यौन सम्बन्ध राख्न तयार नहुने हुनाले यौन सम्पर्क नराख्नु नै उपयुक्त मानिन्छ ।
गर्मीमा छालाको समस्या, कसरी गर्ने छालाको सुरक्षा
चितवन । चितवनमा केही दिनदेखि तातो हावा चल्न थालेकाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बढ्दो गर्मीका कारण छालाजन्य रोगबाट बच्न छालालाई घामबाट जोगाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । गर्मीको मौसम छालाका लागि चुनौतीपूर्ण हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
फ्रिजमा किन अण्डा राख्नुहुँदैन ?
श्रीमानको के–के कुरा श्रीमतीलाई मन पर्दैन ?
एक महिलाले पाँच किलोग्रामको बच्चा जन्माइन्
चितवन । मकवानपुरकी एक महिलाले पाँच किलोग्रामको बच्चा जन्माएकी छन् । चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचाररत मकवानपुरको चुरीयामाई–९ घर भएकी ३० वर्षीया सीता लोप्चनले आज पाँच किलोग्रामकी छोरी जन्माएको अस्पतालले जनाएको छ ।
यो हो विश्वकै अग्लो जिराफ
रक्सी नपाएपछि ह्याण्ड स्यानीटाइजर खाँदा १० जनाको मृत्यु
कौरवको जन्मबारे यस्तो रहस्य जसबारे कमैलाई थाहा छ